Inona no tanjon'ny fanokafan'ny FJKM ny fiangonany?
2021-05-16 @ 01:26 in Ankapobeny
Tampotampoka ihany ny fivoahan'ny taratasy avy amin'ny Biraon'ny Mpiandraikitra Foibe, ny ampitson'ny fahatsiarovana ny andro niakaran'i Jesoa ho any an-danitra. Tsy mahalala izay any ambadiky ny lambam-baravarana isika fa dia ny taratasy niely haingana dia haingana no hita amin'ny tambajotra sosialy. Tsikaritra ny soratra manao hoe "Manamafy fa sokafana". Nahoana? Misy ihany any karazam-pamorian'olona misokatra, misy aza ny efa an'arivony fa odiana tsy hita. Misy ny fikambanan'olona (sy fivavahana) mankalaza fety fa odiana fanina. Koa raha "misokatra" ny hafa, maninona no atao takotakona? Te-hanondro izay nanapa-kevitra fa hitany daholo ireny ka hanapa-kevitra ry zareo.
Mety hisy ny hihevitra hoe efa nisy fifanarahana tany ambadika tany matoa nanao izany ry zareo. Dia namaly tokoa aloha ny tao amin'ny Faritra Analamanga fa mbola mikatona ny Fiangonana. Koa inona moa izany fa raha ny fijeriko dia fihantsiana izao ataon'ny FJKM izao. Aleo koa tsy miolakolaka.
Ary tsy re tsara angamba matoa nanterina ilay hafatra.